Nalalka dabiiciga ah ee loo yaqaan 'Energy Soft Loft' waxay bixisaa tamar farxadeed
Qalabka Loftaalka bilaashka ah (oo ku xiran daraasadda)
Badbaadiso ilaa 30% biilasha kululayntaada
Isku-daboolida bilaashka ah *
Miyuu yahay lacag aad ku qarashgareyso kuleylka guriga, ka soo baxaya saqafkaaga?
Inkastoo seddex meelood oo ka mid ah kuleylka gurigaagu uu lumiyo adiga oo isticmaalaya sariirtaada iyo saqafka, laakiin waxaad ku kaydin kartaa 20% hawo kulul ee gurigaaga adoo rakibaya rinjiga waxtarka leh ee bilaashka ah.
Maalmahan, qawaaniinta dhismaha waxay u baahan yihiin rinjiga daboolka ah ee ku wareegsan 10-12 oo dherer ah. Haddii gurigaaga la dhisay ka hor intaanay 1982 aheyn oo aan dib loo helin rinjiyeynta, markaas waa inaad tixgelisaa inaad diyaariso a sahaminta rahmadda bilaashka ah ee laga helo tamarta korontada.
*Maalgelinta deeqda waxaa laga yaabaa inay diyaar u yihiin shaqooyinka iyo qaddarka deeqda iyo kharashka shaqada ayaa isbedbedeli doona iyadoo ku xiran hadba inta ay CO2 ku badbaadinayso rakibidda hagaajinta.
* Nadiifinta dabiiciga ah sida caadiga ah waa bilaash haddii gurigaagu leeyahay 2 inches (50mm) ama ka yar rinjiga jira. Si loo xaqiijiyo in shaqadu xor u tahay waxaan sameyneynaa sahan qoob-ka-xor ah. Deeqaha ayaa loo heli karaa guryaha oo idil, laakiin haddii aad qaadato waxtarrada waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay kaalmo dheeraad ah, na soo wac si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan 0800 0 246 234
Qalabixiyaha buuxa ee la aqoonsan yahay
LACAG LA'AAN, waajib lagama qaado
Sida aan ku caawin karno